सानो छोरी छाडेर गाउलेको समेत ३५ लाख पैसा लिएर श्रीमती भागेपछी श्रीमान आए मिडियामा (भिडियो हेुर्नस्) – Voice Samachar
दुनियाँ नै चकित हुने यो एक घटना !
नेपालमा आज ९ सय ६६ जनाले कोरोनालाई जितेर घर फर्के
नेपालमा आज १३ सय २५ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि
गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्रमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन उपयोगी गुर्जो रोप्दै महिला
अनमोलसँग क्याप्टेनमा काम गरेर चर्चामा आएकी नायिका उपासना सिंह ठकुरीको आज जन्मदिन
कोरोना त्रासका बीच बैतडीमा २ वर्षीय बालकमा पनि देखियो रुबेला
महान बुहारी – बूढा ससुरा यस्तो हुदा पनि साथ छो’डिनन, परिवारले छोड्यो तर बुहारीले यसरि स्याहार्दै, २४ सै घण्टा बिस्तारामै दि’सापि’साब(भिडियो)
माइजू आफ्नै भान्जा सङ्ग भागेपछी, मामा र दुई छोराछोरिको बिचल्ली
दिपाश्री अविवाहित हुनुको रहस्य खुल्यो यस्तो रहेछ तथ्य थाहा पाउने सबै दंग !
मुख्य पृष्ठ /Video/सानो छोरी छाडेर गाउलेको समेत ३५ लाख पैसा लिएर श्रीमती भागेपछी श्रीमान आए मिडियामा (भिडियो हेुर्नस्)
सानो छोरी छाडेर गाउलेको समेत ३५ लाख पैसा लिएर श्रीमती भागेपछी श्रीमान आए मिडियामा (भिडियो हेुर्नस्)
काठमाडौं । नवलपुरको कावासेतीमा फेरी अर्को उदेकलाग्दो घटना भएको छ । नवलपुरकी मिना राना गाउँभरीका महिलावाट ऋण लिएर हराएकी छन् । ति महिलाका तीन सन्तान छन् । दुई छोरी र एक छोराकी आमा करिब ३२ लाख रुपैया क्षती बनाएर हराएपछि उनका श्रीमान रुँदै मिडियामा आएका छन् । विवाह गरेको १७ वर्ष पछि श्रीमती हिडेपछि उनका श्रीमान अहिले बिचल्लीमा छन् । तीन सन्तान र बृद्ध आमाको स्याहार गर्ने जिम्मेवारी एकातिर आएको छ भने अर्को तिर आर्थिक क्षतीले उनी आफै समस्यामा परेका छन् ।
गंगाबहादुर राना अहिले तीन सन्तान र वृद्ध आमाका साथमा विचल्लीमा छन् । उनका छोराछोरीको पढाई विग्रिएको छ । आमा हराएपछि छोराछोरी विद्यालय जान पाएका छैनन् । गाउँमा विभिन्न समुहमा रहेकी उनले सबै समुहवाट पैसा लिएर हराएकी हुन् । श्रीमान गंगाबहादुरले आफुहरुको सम्बन्ध राम्रो नै रहेको बताएका छन् । आफुले बाहिरवाट पैसाको ब्यवस्था गर्ने र श्रीमतीले त्यसको ब्यवस्थापन गर्ने गरेको बताइन् । श्रीमतीले आफ्नो घरवाट २१ लाख रुपैया र एक तोला सुन लिएर गएको र समुहवाट ऋण समेत गरेर करिब ३२ लाख रुपैया लिएर हिडेको बताएका छन् ।
अहिले ऋण लिएकाहरु दिनहुँ घर घेर्न आउने र श्रीमती देखा भन्ने गरेका छन् । श्रीमान गंगाबहादुरले मिडिया सामु बिलौना गर्दै भने, जसरी पनि मेरो श्रीमतीलाई खोजेर ल्याइदिनु, मेरो सानी छोरी आमाबीना सुत्न पनि सक्दिन, छोरी रुन पनि नसक्ने भएकी छ । उनले विवाह गरेको यति धेरै वर्ष पछि श्रीमतीले यस्तो धोका देन्छिन् होला भन्ने आफुले कहिल्यै शंका नगरेको बताए । जसले पैसा दिए उनीहरुले घरमा आएर भन्ने गरेको बताए ।
गंगाबहादुरले ब्यवहार विग्रेका कारण श्रीमती लुकेको होला भन्ने लागेको छ । अहिले पनि उनले श्रीमतीलाई कुनै शंका भने गरेका छैनन् । दिदी बहिनीलाई समस्या पर्यो भनेपछि मैले नै भनेर पैसा निकालिदिएको हो । उनले मैले सहमति बिना पनि पैसा निकालेकी छन् त्यसको त मैले के जान्नु रु त्यसको जिम्मेवारी मैले लिन्न उनले भने । इन्डियन आर्मीमा २० वर्ष सेवा गरेका गंगाबहादुरले कमाएको पैसा नभएको उनले बताए । पहिला कमाएको घरखर्चमा सकियो होला तर पछिल्लो कमाई भने श्रीमतीले हिनामिना गरेको बताए ।
आँखा देख्दिनन् तर कुनै गायिका भन्दा कम छैनन् ! मनिषा रावलको डेरामा चामल समेत नभएपछि चल्यो रुवावासी !
प्रहरीले नेपाली सेनाका यी युवकको श्रीमती लागेपछि, श्रीमान् श्रीमती को फोनमै झ’गडा अर्को केटा संग सु@तेको स्वीकार गरिन खुल्यो अर्को रहस्य (भिडियो)
पुण्य गौतमको श्रीमती रुदै मिडियामा, पुण्यलाइ हात हाल्ने बिनय जङ बि’रुद्द मु’द्दा हाल्ने ( भिडियो हेर्नुहोस)
राम लिम्बुले पहिलो चोटि आफ्नै ठाउँ झापामा सुन साइली गाउदा सबैका आँखा रसाए (भिडियो हेर्नुहोस
धेरै पछि सार्वजनिक कार्यक्रममा हँसाउन पुगे धुर्मुस सुन्तली, युवतीका बिचमा यसरी मर्काए धुर्मुसले कम्मर (भिडियो हेर्नुस्)